Dugsiyada gaarka ahi Deeqaha Waxbarasho Way ka Badsadaan Kuwa Dawliga ahYour Everyday News
Dugsiyada gaarka ahi Deeqaha Waxbarasho Way ka Badsadaan Kuwa Dawliga ah
September 13, 2019 Booddaale News Opinions 0
Haddii aad xogogaal u tahay siday dugsiyada gaarka ahi u helaan deeqaha waxbarashada, waxa ku soo baxaya sawir muujinaaya in ay kaaf iyo kala dheeri isku yihiin kuwa dawliga ah ee wax ka suga gacanta dawladda maamusha. Doodda dugsiyda gaarka ah ee deeqaha waxbarasho ee noo gaar ahna waanu qarsanaynaa ta dawladu soo heshana aanu ka qaybgalno, waxa ay la mid tahay xigmadii ahayd”Tuke ayaa shimiraha iyo haadka shiriyey, waxaanu ku yidhi inta aan u weynahay ha cunto hilibka, inta aan u yarahayna ha cunto midhaha. Waxa aan ahay xidhiidhiyaha labada dhinac. Markaa anigu haddaan ahay Tuke labadaba waan ku jiraa”. Dedaalka ay dugsiyada gaarka ahi geliyeen waxbarashada ayaa ah mid mudan, inkasta oo ay qaadaan lacag adag oo u dhiganta waxa ay bixinayaan. Qormadan waxa aynu ku lafaguri doonaa siday deeqaha waxbarashada u helaan dugsiyada gaarka ahi iyo siday uga qatan yihiin kuwa dawliga ahi.
Deeqaha Ay Helaan Dugsiyada Gaarka loo leeyahay
Dugsiyada gaarka ahi waxa ay isugu jiraan kuwa ardayda wax ku bara luuqada Ingiriisiga iyo kuwa sii diciifaya oo af-carabi wax ku bara ardayda ay hayaan. Tusaale ahaan dugsiyada gaarka ah ee ay maamusho dallada Qarni Ifriiqiya oo ah kuwa ku baxa luuqada carabiga, waxa ay deeqaha waxbarashada ka heli jireen dalalka muslimka ah muddo dheer. Welina lama arag deeq waxbarasho oo ay heleen oo ay wax ka siiyeen ardayda dhigta dugsiyada dawliga ah. dallada AL-FAJRI oo ay ku jiraan 20% dugsiyada gaarka ahi, waxa ay xidhiidh toos ah la leedahay dalladda waxbarasho ee ka jira dalka Soomaaliya oo la yidhaa FPNS (Formal private school education network in Somalia) oo ay ka helaan deeqo waxbarasho. Inkasta oo ay dalladaasi wakhtigan hoos u dhac uu ku yimid, ka dib markii ay xoogaysatay wasaaradda waxbarashadda Soomaaliya.
Maxaa Keenay ladhka?
Siday Dugsiyada Dalwadu ula tartami karaan kuwa Gaarka ah?
Barnaamij Gaar Ah Wakiilada Maraakiibta Dekada Berbera